Walter Heyer: UTransgender Regret | CELISA
I-Walt Heyer-Owayesakuba nguTransgender.
I-Walt inendaba eqhelekileyo. Ukukhulisa isidlo ngokwesini kunye nokuxhatshazwa ngokwesondo kubangela ukudideka ngokwesondo kunye ne-dysphoria yesini.
UWalt wehla ngendlela ye-transgender ukuya kuhlala njengomfazi phantse iminyaka eli-10. Isiphithiphithi esitshabalalisa umsebenzi ophumelelayo kunye nobomi bosapho.
Ekugqibeleni uWalt wayengasayi kuphinda ayithathe imbambano yangaphakathi. Kwakukushiya ubomi be-transgender okanye bafe. Walt khetha ubomi. Ungangena kwiincwadi zikaWalt ​​kunye newebhusayithi yokuxhasa kweli phepha.
Ukuvavanywa kwabantwana bethu: Oogqirha abazi ukuba ngaba abantwana boTrans baNene ngubani.
Ogqirha okwangoku abanandlela yokuqikelela ukuba yeyiphi na inesini yabantwana abaya kuthi baqhubeke nengqondo yabo yesini, kwaye sebenyanzela ubuncinci beminyaka kunyango olungenakuguqulwa lwe-hormone kunye noqhaqho olusezantsi kangangoko.
Amanqaku kaWalt ​​Heyer's kwiNtetho yoLuntu.
UWalt ubhale inombolo okanye amanqaku eNtetho yoLuntu kwi-transgender intshukumo.
Kuqala kwavela kwiNtetho yoLuntu: I-Ethics, Umthetho kunye neLungile, i-Intanethi ye-Witherspoon Institute yasePrinceton, NJ kwaye iphinde yabhalwa ngemvume.
Amanqaku kaWalt ​​Heyer's kwi-Federalist
UWalt ubhale inombolo okanye amanqaku e-Federalist kwintshukumo ye-transgender.
Amanqaku eWalt Heyer's kwiSignali yeDaily.
UWalt ubhale inombolo okanye amanqaku eSignali yemihla ngemihla malunga nokuhamba kwe-transgender.
Ibali likaReggender likaWalter Heyer.
UWalt Heyer ubhala ngobomi bakhe ukusuka kumntwana odidekileyo ukuya kumfazi otshintshayo kunye nomva.
Eli nqaku liprintwe e-USA Namhlanje:
I-Walt Heyer's Sex Guqula iRegret Bookhop.
I-Wret yeWebhu yokuTshintsha kweSondo kwiWebhusayithi.
Ukuxhasa ababambeleyo uWalt udale iwebhusayithi ebanzi enamanqaku, amabali kunye neencwadi.